अवैध रुपमा नदीको मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसरहरुको अनुगमनमात्र हुन्छ कि कार्वाही पनि हुन्छ ? — donnews.com
अवैध रुपमा नदीको मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसरहरुको अनुगमनमात्र हुन्छ कि कार्वाही पनि हुन्छ ?
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका सदस्य पोखरा महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसीलगायतको अनुगमन टोली सोमबार कास्की तनहुँ सीमा कोत्रेमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको छ । कोत्रेमा बर्षौंदेखि मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसरहरुले नदीदोहन गर्दै अर्बौं रुपैयाँ लुटिसकेका छन् । आशा गरौं, यो अनुगमन टोलीले पक्कै पनि मापदण्ड र कानुन विपरित सञ्चालित क्रसरहरुलाई कार्वाही गर्नेछ र त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गर्नेछ । तस्वीर :कृष्ण दवाडी/रासस
फोटो फिचर सँग सम्बन्धित